Nọmba ndị Egypt sitere na 1 ruo 100: iwu na njirimara - UniProyecta
Nọmba ndị Egypt sitere na 1 ruo 100
Ụwa ọnụọgụ nke Alaeze Ukwu Egypt na -adọrọ mmasị. Taa, anyị nwere ike ịgụ ma dee ọnụọgụ dịka ha mere. Ị chọrọ ịmụta ka esi edekwa ha? Nọgidenụ na -agụ ma ị ga -enweta mkpịsị ugodi niile.
Ihe mbụ anyị ga -eme bụ ihe dị iche n'etiti nnọchite anya ọnụọgụ na hieroglyphs n'otu aka, nke ejiri wee debe ya na okwute na nke bụ ihe anyị ga -amụta ka e si ede, n'aka nke ọzọ ihe nnọchite anya n'usoro ọchịchị. , nke ọ dị nnọọ iche na nke a na -ede kwa ụbọchị na papyri a ma ama.
Ọbụlagodi taa mmadụ nwere ike ịhụ ụfọdụ akwụkwọ mgbe ochie nke gosipụtara ọbụna nnukwu mgbakọ na mwepụ mgbakọ na mwepụ, mana ọchịchọ ya ịmụ ihe site na usoro usoro mgbakọ na mwepụ kwesịrị ka enwe mmasị.
N'agbanyeghi na ndị ode akwụkwọ ga -ebuli ọdịbendị ha elu na akụkọ ha, nnukwu ndị edemede Greek zoro aka na ndị Egypt dị ka ndị nkuzi n'ọtụtụ mgbakọ na mwepụ dịka geometry ma ọ bụ mgbakọ na mwepụ.
Ndị Ijipt jiri ọnụọgụ ndị a kemgbe alaeze etiti Egypt, agbanyeghị na a naghị eji ya eme ihe mgbe ọ na -ede papyri kwa ụbọchị. Ebe ọ bụ n'oge a ka ejirila usoro hieratic, usoro ide ihe nke na -enye ndị odeakwụkwọ ohere ide ihe ngwa ngwa.
Agbanyeghị, mgbe a bịara n'ịkpụ ihe na okwute, ejiri cryptogram ndị a mee ihe.
Anyị na -amụta asụsụ hieroglyphics maka njem, nke Napoleon Bonaparte nyere iwu, na 1799. Njem dị otú ahụ chọpụtara nnukwu mbadamba granite na Rosetta, Egypt, nke England ga -ewe ihe karịrị afọ atọ ka e mesịrị na nke dị taa na British Museum na London ..
Nkume ahụ nwere ederede n'asụsụ atọ dị iche iche: hieroglyphics, demotic Egypt, na Greek oge ochie; a maara dị ka Rosetta Stone.
Na 1822, Jean François Champollion, malitere ịkọwa ya na afọ na -esote Thomas Young nyekwara aka na ọrụ ahụ. N'ime afọ ndị sochirinụ, ọtụtụ ndị edemede ndị ọzọ esonyela na ihe kpatara ya, si otú a na -akọwapụta asụsụ hieroglyphics maka mmadụ niile.
N'ezie, ihe kacha mkpa maka mgbakọ na mwepụ bụ Henrich Brugsch, ebe ọ bụ na 1849 ọ bipụtara "Numerorum apud Veteres Aegyptios", akwụkwọ izizi na -amụ mgbakọ na mwepụ Egypt na akụkọ ihe mere eme nke oge a ".
1 Otu esi agụ ọnụọgụ Egypt: akara na uru
2 Iwu maka ịtụgharị ọnụọgụ Egypt ka ọ bụrụ Arabic (ọnụọgụ anyị)
3 Mgbakọ na mwepụ ndị Egypt
Otu esi agụ ọnụọgụ Egypt: akara na uru
Ejiri akara mkpụrụedemede ndị a na -anọchite anya ike dị iche iche nke iri:
Ije ije. Na -anọchi anya nkeji:
Asa. Na -anọchite anya iri:
Eriri eriri. Na -anọchite anya narị otu narị:
Ifuru Lotus. Na -anọchi anya otu puku:
Aka. Na -anọchite anya iri puku kwuru iri:
Frog (ma ọ bụ tadpole). Na -anọchite anya ọtụtụ narị puku:
Heh (chi nke ebighebi na mgbe ebighi ebi). Na -anọchite anya otu nde ma ọ bụ enweghị njedebe:
Iji ghọta ya nke ọma, anyị akwadebela ihe onyonyo ya na ndepụta nọmba ndị Ijipt site na 1 ruo 100, na ọbụna karịa:
Yabụ ọ bụrụ na ọnụọgụ ịnọchite anya ya bụ 1.322, anyị ga -ede
Ma ọ bụ anyị nwekwara ike dee:
dịka enwere ike dee ya n'usoro ọ bụla.
I kwesịrị ịma na 0 adịghị adị (ruo mgbe usoro ndị eze XIII, na Middle Egypt) wee malite iji akara ngosi "nfr" na papyrus na
na nnọchi anya hieroglyphic. Agbanyeghị na nke a pụtara oghere efu nke dị tupu 1 (nke ga -emecha bụrụ oke n'etiti ọnụọgụ dị mma na adịghị mma). Mana echeghị na ọ ga -ejupụta ọnụọgụ ka anyị na -eji ya na mkpụrụedemede Arabic anyị, n'ihi na usoro ide ihe a ga -abịa mgbe e mesịrị.
Iwu maka ịtụgharị ọnụọgụ Egypt ka ọ bụrụ Arabic (ọnụọgụ anyị)
Anyị nwere ike gụọ ma tụgharịa hieroglyphs ọnụọgụ n'ime ọnụọgụ Arabic anyị naanị site n'ịtụgharị usoro a dị n'elu. Ọ bụrụ na anyị ahụ nọmba edere n'elu okwute sitere na Egypt oge ochie, dịka ọmụmaatụ
anyị nwere ike ịdọrọ na ọ bụ 45.003.
Enwere ike dee ya site n'aka ekpe gaa n'aka nri yana nke ọzọ, yana kwụ ọtọ (n'elu ruo ala).
Jiri ọtụtụ akara dị ka ịchọrọ (site na 1 ruo 9) iji gosi ọnụọgụ achọrọ.
Kpọkọta ha na ngọngọ ebe a na -eme ọtụtụ akara otu ugboro:
Ọ bụrụ na ị bụ onye ode akwụkwọ Egypt, ị ga -ahụrịrị na ị ga -eji nke a naanị mgbe ị na -ese ihe na okwute, iji dee papyri ka mma jiri akara nke hieratic nke demotic Egypt.
Enwere ike ịnọchite anya ọnụọgụ ndị Egypt na ọnụọgụ ma ọ bụ kwa
Ịmepụta usoro iwu: maka nke mbụ ha nwere akara pụrụiche:
. Site na nke abụọ ruo na nke itoolu, ị ga -etinye ite n'ime ọnụọgụ, dịka ọmụmaatụ:
. Site na nke iri gaa n'ihu, a na -akpụ ha site na ịgbakwunye otu akpọrọ "jupụta" nke nwere ụdị a:
Mgbakọ na mwepụ ndị Egypt
Ndị Ijipt amaralarị mgbakọ na mwepụ na ọkwa ụfọdụ, na -eburu n'uche na anyị enweghị ihe akaebe ruo Middle Egypt na ha maara nọmba 0. Ihe odide Egypt kacha ochie anyị maara na -egosi iji mgbakọ na mwepụ ndị Ijipt bụ Moscow Papyrus, nke malitere. malite n'oge ahụ ruo n'afọ 2000-1800 BC
Mana cheta na maka nke a, ha jiri mkpụrụedemede ndị ọzọ karịa nke ejiri na hieroglyphics nke anyị hụrụ n'elu. Ndị Ijipt n'akwụkwọ ha dere (ọ bụghị naanị ọnụọgụgụ kamakwa mkpụrụedemede ndị ọzọ niile) n'asụsụ ha, Egypt demotic, nke edere na ọkwa dị iche iche.
Site na usoro ihe a, ndị Ijipt dere ngwa ngwa, ebe ọ bụ na ha chọrọ ọtụtụ mkpụrụedemede ole na ole iji nọchite anya otu ọnụọgụ.
Ma eleghị anya ọ bụ site n'oge gara aga, mana anyị maara nke ọma na ka ọ dị na 1650 BC ha maara maka mgbakwunye na mwepụ, mmụba na nkewa, usoro mgbakọ na mwepụ na usoro jiometrị, ụmụ irighiri ihe, ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọgụgụ dị mkpa, ihe mgbako, geometric na harmonic pụtara, na otu. iji dozie nha ahịrị ahịrị nke mbụ. Ọzọkwa na site na 1300 a. C. nwere ike idozi akara algebra nke abụọ (quadratic).
Ọ dị egwu? Cheedị echiche banyere nnukwu pyramid ndị ahụ: Ị maara na ha bụ ndị ama ama maka izi ezi mgbakọ na mwepụ ha? Ha bụ ihe akaebe ọzọ nke ọkaibe na mgbakọ na mwepụ ndị Egypt etinyere, na nke a, maka owuwu.
Banyere ụmụ irighiri ihe dị n'ahịrịokwu anyị maara
, ọnụ ọgụgụ dị ka ọnụ ghe oghe. Dị ka a ga -asị na ọ bụ idepụta nọmba 'na -eri' n'onwe ya n'ụzọ ihe atụ.
Ọ na -anọchite anya otu egwuregwu site na nọmba ị tinyere ya. Na mgbakwunye na -anọchite anya ụmụ irighiri ihe, ya bụ, nke pere mpe n'etiti nọmba ọ bụla, ha nwekwara ụzọ abụọ n'ime ụzọ atọ (2/3) na ụzọ atọ n'ụzọ anọ (3/4).
Ịgbakwụnye ụmụ irighiri ihe ndị a n'ụkwụ ole na ole n'ime ihe osise anyị nwere ọnọdụ abụọ enwere ike: ụkwụ "na -eje ije" na ntụnye ederede ma ọ bụ ụkwụ na -emegide ya. Ọ bụrụ na ha agaa n'akụkụ ebe a na -ekwupụta ya, ha na -apụta mgbakwunye. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ụkwụ aga n'akụkụ ọzọ, ọ pụtara mwepụ.
Inicio » omenala » Nọmba ndị Egypt sitere na 1 ruo 100